Ukuhlaziywa kwe-OAU Student Portal Login www.eportal.oauife.edu.ng/login.php
Ukungena kwePortal yokungena kwabafundi: Igunya le-OAU lenze i-portal yomfundi. Kwaye le portal ibonelela bonke abafundi abanokuba nolwazi malunga neenkqubo zokwamkelwa kweziko.
Kwakhona, kule portal, abafundi abatsha kunye nabafundi ababuyayo baya kunikwa phantse yonke into abayifunayo ukwenza ukuba ukufunda kwabo kube lula kwaye kube ngcono ngakumbi kwiziko.
KwiYunivesithi yeObafemi Awolowo (OAU)
IYunivesithi yase-Obafemi Awolowo (i-OAU) ngaphambili yayisaziwa njengeDyunivesithi yase-Ife. Kwaye ngurhulumente waseburhulumenteni ophetheyo nosebenza eyunivesithi yaseNigeria. Kwakhona iyunivesithi ikwisixeko sakudala Ile-Ife, Urhulumente wase-Osun, Nayijeriya.
Iyunivesithi yasekwa nge1961 kwaye iiklasi zaqala ngo-Okthobha u-1962 njengeDyunivesithi yase-Ife. Kwaye oku bekungurhulumente wengingqi yeNtshona yeNigeria, ekhokelwa yinkosi engasekhoyo USamuel Ladoke Akintola. Yabizwa ngokuba yi-Obafemi Awolowo University kwi-12 kaMeyi ka-1987.
Nangona kunjalo, ukuphinda kuthiwe igama kwakuyimbeko ye-Chief Obafemi Awolowo (1909-1987), inkulumbuso yokuqala yeNgingqi yeNtshona ye-Nigeria, eyayinengqondo ye-yunivesithi.
Ukungena kwePortal yokungena kwabafundi kwi-OAU
Ushwankathelo lwe-OAU yokungena kwabafundi kwiPortal yokungena
Ukuze ungene okanye ungene kwi-portal yokwamkelwa kwe-OAU, kufuneka uyazi kuqala.
Ikhonkco lokungena lokwamkela i-OAU - www.eportal.oauife.edu.ng
I-portal ibonelela ngokungena kumfundi omtsha, obuyayo umfundi. Abasebenzi (abafundisayo nabangafundisiyo). Njenge;
1. Jonga / Yenza iRRR yeNtlawulo
Yintoni intsingiselo yeRRR? I-RRR imele nje Isalathiso sokubuyisa iRemita. Ungajonga ngokulula nangokukhawuleza imeko yakho yokuhlawula iRemita. Kwaye oku kukucofa kwi-RRR Ikhonkco iqhosha elinikezelweyo kule portal.
Le portal ikunceda ujonge / uvelise imeko yokuhlawula ye-Remita yokuqinisekisa ukuhlawulwa kweeNtlawulo ze-OAU.
2. Ukubuyela kwabaNgena kwabaFundi / ukungena kwabaFundi okuTsha
Omnye umsebenzi obalulekileyo kukuba ubonelela abafundi beli ziko liphezulu lemfundo, ukufikelela ngqo kwideshibhodi yabo. Nangona kunjalo, kubafundi abangazi ukuba bangaphi okanye phi ukufikelela kwi-OAU kwideshibhodi ye-intanethi, i-OAU yindawo omele ube kuyo.
Ikwabonelela umfundi ngonxibelelwano olulula noluthe ngqo kubhaliso lwabafundi be-OAU Portal.
3. Ukubhaliswa kwezifundo zeSemester
I-OAU portal ibonelela abafundi ngokufikelela ngokulula ukubhalisa ngokukhawuleza kwizifundo zabo zesemester kunye nolunye ubhaliso olubalulekileyo.
Kwakhona, ngeli phepha, uya kunikwa ikhonkco lobhaliso lwe-OAU Semester, kubandakanya oku kulandelayo njengoko kudwelisiwe apha ngezantsi;
Amaziko okufunda e-OAU.
Kwakhona, abafundi ababhalisiweyo be-OAU.
Ukongeza, abafundi be-Undergraduate Students.
Ngaphaya koko, i-OAU yamkele abafundi abaphumelele izidanga.
Kwaye, ukubhaliswa koviwo.
Kwakhona, iikhosi ezibhalisiweyo ze-OAU zoviwo.
4. Isicelo sokwamkelwa kwi-OAU
Ngoku unokufaka isicelo sokwamkelwa kwi-OAU ngokusebenzisa i-OAU portal. Xa ufaka isicelo sokwamkelwa, uya kunikwa oku kulandelayo:
Uluhlu lweeNkqubo ze-OAU.
Uluhlu lweendawo zokufunda ze-OAU, apho uza kubona iziko elikufutshane nawe.
Ukongeza, isikhokelo sendlela yokufaka isicelo kwiinkqubo zesidanga sokuqala.
Kwakhona, isikhokelo senkqubo yesidanga sokuqala.
Kwaye, ungayijonga njani i-ID eyahlukileyo.
Ungena njani kwi-OAU yokungena ePortal
Faka iNombolo yakho yokuBhalisa (iNombolo yeMatriki) okanye iSazisi saBasebenzi njenge-UserId kwiphepha lokungena.
YaBafundi abaTsha, ukungena kuqala kufuna ukuba usebenzise inombolo yakho yoBhaliso ye-UME (umz. 12345678ZZ) okanye inombolo yobhaliso lwaphambi kwesidanga (umz. PDP05 / 9999) njengePassword. Uyacetyiswa ukuba uyitshintshe kwiPassword oyifunayo ngokukhawuleza xa igama lakho lokuqala liphumelele.
Oku kubaluleke kakhulu kukhuseleko lweAkhawunti yakho.
UkuBuyela kwabafundi, ukungena kuqala kufuna ukuba usebenzise umhla wokuzalwa kwifomathi: DD / MM / YYYY njengePassword. Uyacetyiswa ukuba uyitshintshe kwiPassword oyifunayo ngokukhawuleza xa igama lakho lokuqala liphumelele. Oku kubaluleke kakhulu kukhuseleko lweAkhawunti yakho.
Bese uchofoze Ngenisa.
Ukuba ukungena kwakho ngempumelelo kuphumelele, igama lakho liya kuboniswa kunye neFoto yakho yokundwendwela (ukuba iyafumaneka). Ukuba ifoto yeyakho, uyacetyiswa ngamandla ukuba uxele kwiGosa loKwamkelwa ukulungiswa. Emva koko Chofoza OKuqhubeke.
Uluhlu lwemisebenzi onokuyenza njengomfundi iya kuboniswa.
Cofa kuyo nayiphi na imisebenzi efanelekileyo.
Ukugqitywa, cofa ku-SIGN OUT ukuvala iseshoni yakho yokungena ukuze unqande ukulingiswa kweakhawunti yakho.
Ukuba awunalo i-IDIDITY CARD yeYunivesithi, xela iZiko leKhompyuter ukuze lisetyenzwe kwangoko.
Ukufumana isikhokelo esibanzi, cofa apha
Cofa u-KULUNGILE ngezantsi ukukusa kwiphepha lokungena
Nceda uqaphele ukuba INDAWO YOKUHLALA iyafumaneka ngoku kwiAkhawunti yakho yobuqu.
Yintoni omele uyenze xa ukwindawo yokungenisa i-OAU
Ngenisa ifoto yeprofayile yomfundi
Kwakhona, yenza ikhowudi ye-remita yokuhlawula iifizi zesemester zesikolo kunye neerejista zekhosi / zeemviwo
Ngapha koko, phrinta ikhadi lesazisi somfundi le-OAU
Ukongeza, phrinta iikhosi / isiliphu sobhaliso lweeMviwo
Kwakhona, yenza izitampu zifakwe kwiziko lakho lokufunda
Ukongeza, khuphela i-OAU e-Exam / Ithayimthebhile yephepha
Kwakhona, qala ngokungenisa ii-TMA ezilayishiwe
Zibeke kunye ukuze ubone kwiholo leemviwo
Nangona kunjalo, yiba sentlalweni ngokwabelana nabanye ngale post. Kwaye, ukuba unayo nayiphi na imvakalelo kunye nemibuzo malunga I-OAU Portal yomfundi ungene, nceda ushiye uluvo lwakho apha ngezantsi. Siza kuyiphendula ngokukhawuleza.
Uhlaziyo lwe-OAU kwi-COVID-19 Ubhubhane waBasebenzi naBafundi
I-COVID-19: I-OAU iqala ukuKhuthaza ukuSasazwa kweziNto zoNcedo
Ukubuyiselwa kwemali ye-OAU yeNkqubo yoLwamkelo lweeMali zabafundi abatsha be-2019/2020
Iimali ze-OAU zeSidanga sokuqala seSikolo 2019/2020 yaBafundi abatsha nabaBuyayo
Ukuqeshwa kweYunivesithi iObafemi Awolowo 2018 kunye nendlela yokufaka isicelo kwizithuba ezikhoyo
Ukuqeshwa kweYunivesithi iObafemi Awolowo 2017 | Ungasifaka kanjani isicelo seYunivesithi yaseObafemi Awolowo (OAU)
I-Obafemi Awolowo Yunivesithi yokuGaywa kwabasebenzi abangafundanga i-2017 | Isikhokelo sokuSebenza kunye neemfuno
tags: ukubaluleka kokungena kwamasango okungena kwabafundi, ukungena ngemvume kwe-portal yomfundi, KwiYunivesithi yeObafemi Awolowo, isishwankathelo sokungena kwamasango okungena kwabafundi
« Ukuqeshwa kweFenix ​​yaMazwe ngaMazwe 2021/2022 Ifom yesicelo seFortal